Kedu ọsọ agbụrụ kacha sie ike? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Ragba ígwè agba 2019 - ịza ajụjụ ndị a
Ragba ígwè agba 2019 - ịza ajụjụ ndị a
Kedu ọsọ agbụrụ kacha sie ike?
Njegharị DE France
Amaghị m banyere gị, mana otu n'ime akụkụ kachasị amasị m n'ịgba ịnyịnya ígwè na-elele ịrị elu uru n'ezie ugwu dị egwu. Ya mere, anyị chere na anyị ga-ele anya iri nke ugwu kachasị sie ike nke ịgba ọsọ na-agba ọsọ. Zoncolan Ọ bụrụ na ị jụọ ọtụtụ n'ime ndị na-agba ịnyịnya ígwè ihe mgbago kasị sie ike na ịgba ịnyịnya ígwè bụ, enwere m ezigbo obi ike na ọtụtụ ga-akpọ Monte Zoncolan, ọ na-esikwa ike ịgbagha ma ọ bụghị.
Dika onu ogugu bu ihe jọgburu onwe ya, 10.5km na nkezi nke 11.5% nke siri ike dika o di mana 8km ikpeazu lara 15% !! Akụkụ siri ike nke Ovara's Zoncolan bụ ugboro ise na Giro d 'Italia na otu ugboro na Giro Rosa, n'oge na-adịbeghị anya Chris Froome na Annemiek Van Vleuten meriri.
Angliru N'ihe banyere ịrị elu nke Europe na ịgba ịnyịnya ígwè, nke a nwere ike ọ bụ naanị ọrịrị na-ama aka na Zoncolan kwuru na ọ bụ ugwu kacha njọ na-agba ịnyịnya ígwè Anyị niile nwetara ohere ịgba Angliru n'afọ gara aga, yabụ enwere m ike ịgwa gị n'onwe gị na ịrịgo a bụ nzuzu siri ike. N'ụzọ ụfọdụ, echeghị m na anyị rutere nso n'oge onye na - ejide KOM, Roberto Heras, ọ rịgoro na naanị 41 nkeji 55 sekọnd. Muro di Sormano The Muro di Sormano hụrụ na Il Lombardia n'etiti 1960 na 1962, ma na 1962 e kpebiri na ọrịrị bụ n'ezie kwa ike maka ọduọ anyịnya igwe! Emeghị ịrịgo ịrịgo maka ọsọ ahụ rue 2012 mgbe emechara ụzọ ahụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, a na-esezi ụzọ ahụ site na nkwupụta na oge sitere n'aka ndị ọkwọ ụgbọala 1960. Kedu maka stats ahụ? Muro bụ naanị 1, 7 km ogologo ma na nkezi 17.5% na nke kachasị 25%! KOM nwere Vincenzo Nibali na Thibaut Pinot ugbu a na oge 8min16.Ventoux Nnukwu nke Provence ga-abụ otu n'ime ugwu kachasị mma na ịgba ịnyịnya ígwè, mana ọ nọghị ebe a n'ihi oge dị egwu nke mere na mkpọda ya, ma n'ihi na ọ bụ nnọọ ike n'ezie na ndepụta! Arịrịrịrị, nke ọtụtụ n'ime ha gbara ọsọ na akụkụ Bedoin, nwere ike kewaa ụzọ atọ.
Nke mbụ 5.5km bụ ezigbo 4.4% nkezi naanị iji kpoo gị ọkụ.
Mgbe ahụ, 9.5 kilomita na-esote ga-agbaji ụkwụ gị, na-ekwu ihe karịrị 9%. Ikpeazụ 6km naanị nkezi ihe karịrị 7% ma ugbu a ị na-gụrụ obi ọjọọ okpomọkụ na ọhịa ifufe nwere ike imebisi Mont Ventoux! Koppenberg Ọ bụrụ na ọ bụ ụzọ nkịtị, ụzọ awara awara, Koppenberg ga-abụ ọmarịcha ọrịrị ọrịrị Ọ bụ 600m ogologo, nkezi nke 11.6% na a kacha nke 22%.
Ma Koppenberg abụghị okporo ámá. Kama nke ahụ, paịlị bụ otu n'ime okwute okwute kacha sie ike ma na-amị amị nke a ga-agbago na Tour nke Flanders rụzuru n'onwe ya, yana kwa afọ na njem nke Flanders, ọtụtụ ndị ọkachamara na-emecha ọtụtụ ịrịgo ahụ! Alto de Letras Leahapụ Alto de Letras anyị ugbu a Europe. Nke a enweghị ike ịdị iche karịa Koppenberg dị mkpụmkpụ ma dị mkpụmkpụ, site n'ebe dị anya Alto de Letras na le Der Letras bụ 80.7 km ogologo! N'ebe a dị anya, ndị ọkwọ ụgbọala na-arịgo 3187 m, nke kwekọrọ na nkezi nke 3.95% na nke kachasị nke 11%.
A na-agba Alto de Letras na Vuelta a Colombia, na-eme ihe n'eziokwu, enweghị m ike iche n'echiche etu o siri sie ike ịgba ọsọ igwe! Ugwu Ugwu Nke a abughi ugwu nke otutu mmadu maara aha ya, mana inwere Ikekwe I nuru banyere oso nke na-arị ugwu Ugwu, Nsogbu TaiwanKOM. Obi abụọ adịghị ya na Taiwan KOM Challenge bụ otu n'ime ụbọchị kachasị sie ike na igwe kwụ otu ebe nwere ike ịnwe, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ nke ahụ bụ ihe Simon na-ekwu mgbe niile. N'ime 105km ndị na-agba ịnyịnya na-arịgo 3275m nke na-eme ka ọ dị ntakịrị ala karịa Alto de Letras, mana ịrịgo a bụ n'ezie ihe 8km ikpeazụ, 8km ikpeazụ AVERAGE 17%, yana gradient kachasị nke 27.3% .Mortirolo Anyị nọ ugbu a Alps na Passo Mortirolo, nke ozo di egwu nke Giro d’Italia, Mortirolo dika 10.5% maka 12.4 km nwere gradient kacha elu nke 18%.
Mortirolo bụ oge 10 na Giro si Mazzo di Va. rịgoro n'akụkụ ltellina. Nke ahụ gụnyere ọmarịcha ụgbọala nke Contador na Stage 16 nke 2015 Giro, ebe ọ nwere taya dara ada na mgbago ugwu ahụ, na-achụ naanị ya ma na-agbadata onye ya na ya kacha nso, Fabio Aru, n'ihu elu, Plateau de Solaison Onye ọzọ-ọ bụghị -amara ịrị elu Ọ dị mma, mana nke kwesịrị ịdị na igwe mmadụ ọzọ, Plateau de Solaison.
Naanị oge ole na ole ka Solaison nọ, nke a kacha mara amara na njedebe ikpeazụ nke Criterium du Dauphine 2017, ebe Jakob Fuglsang napụrụ Richie Porte mmeri. Ogologo oge sola bụ 9,2% maka 11.3 km, nke kilomita abụọ na ihe karịrị 11% mgbe ụzọ gbagoro ugwu site na obere obodo Thuet.
Alto de los Machucos Alto de los Machucos dị elu ọbụna site na ụkpụrụ nke Vuelta a Espana. Onu ogugu nke Machucos bu ihe na-adighi eduhie, nke dika 8.7% maka 7.2 km.
Ma kilomita nke ikpeazụ dị larịị! Ihe dị ka ihe dịka kilomita 2.5 n’okporo ụzọ ahụ na-agbago rue 28% ma n’oge a ụzọ ahụ dị larịị nke na ọbụnadịghị ụzọ. Kama nke ahụ, a na-eji mbadamba ihe iji nye ụgbọ ala ka mma, iji mee ya n'elu nke a bụ nzuzu !! Ka anyị gaa, 10 nke toughest climbs na ọkachamara ịgba ígwè, nke climbs kwesịrị youngink mere na ndepụta? Mee ka anyị mara na ngalaba nke dị n'okpuru
Kedu okirikiri kacha mma maka ịgba ọsọ?
A na-ewere Tour de France dị ka nke “a kasị akwanyere ùgwù nakasị sie ike'agbụrụ ịnyịnya ígwè. Ọ bụ emume kwa afọ nke ụmụ nwoke, nke a na-emekarị na France. Naagbụrụna-agwakwa mba ndị agbata obi ha mgbe ụfọdụ.
Have kpebiri ịzụta ụzọ ịnyịnya ígwè mbụ gị, n'ụzọ dị ịtụnanya ị werela nzọụkwụ mbụ gị n'ime ụwa buru ibu karị, mana ịzụrụ igwe kwụ otu ebe mbụ gị nwere ike ịnwe ntakịrị ihe na mgbagwoju anya ebe ha dị ka ụdị dị iche iche nke ihe dị iche iche nwere ihe dị iche iche. gafere, yabụ anyị nọ n’isiokwu a aga m enye gị ntuziaka bara uru ma gwa gị ihe ị ga-achọ na ihe dị iche na m nwere obi ụtọ banyere ịgba ịnyịnya ígwè, yabụ ihe ọ bụla na-eme ka ọtụtụ mmadụ banye igwe kwụ otu ebe na agụụ ahụ niile mma gbawara. Ọ bụ ya mere anyị ji jikọọ ọnụ na Decathlon, ha nwere igwe kwụ otu ebe zuru oke nke nwere ọtụtụ atụmatụ dị iche iche ma ha dịkwa oke ọnụ ahịa maka ego, nke pụtara na nke a bụ ebe kachasị mma ka m gosi gị ihe niile ị nwere ike ịme na m chọkwara kitesurf kite ohuru gbakwunyere echiche nke jiri otu okwute wee nwuo nnunu abuo. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọpụta ego ole ịchọrọ imefu, mana ego ole ka ị ga - emefu nke ọma enweghị azịza ziri ezi na ajụjụ a ma a bịa n’ịzụ igwe kwụ otu ebe, mana ihe ị ga - amata bụ na elu àgwà ntinye-larịị n'okporo ụzọ anyịnya igwe na-amalitekarị na gburugburu 260 oro ma ọ bụ £ 250 dị ka nke a na mgbe ahụ ka ị ga-esi na ego ndị ọzọ na-adịkarị mfe na stiffer na ihe ndị dị na okpokolo agba ndị a na-adị mfe ma nwee ọkaibe karịa gburugburu 600 euro ị nwere ike nweta ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-atụ egwu ego, ọ na-abụkarị ihe m ọ bụ aluminom mebiri ụfọdụ ọfụma ntinye dị ka ikekwe diski breeki na igwe kwụ otu ebe na ụdị ngwa a nwere ike ị nwere ike, ị nwere ike ịmara n'ezie na ugwu ma ọ bụ ugwu nwere ike ịbụ ma gbaa agbụrụ ole na ole n'ụgbọ ịnyịnya na ụdịdị a dị iche iche amaara m nke ahụ, n'ihi na enwere ihe niile m mere n'ụgbọala okporo ụzọ mbụ m, m ga-atụ aro ka ị ghara iji ego gị niile na igwe kwụ otu ebe naanị, mmefu ego na ohere niile dị mkpa mmanụ dị ka akpụkpọ ụkwụ na pedal, uwe na ihe niile ị ga-ebu ụzọ mkpa ka ị tụlee mgbe ị na-ahọrọ igwe kwụ otu ebe, ihe ndị agbakwunyere na ya site na mkpokọta okwu maka breeki na gia bụ otu ugbu a enwere ndị nrụpụta dị iche iche nke otu Campagnolo, SRAM microchip na ikekwe Shimano a kacha mara amara, nke na-anọghị na ụdị otu a na-ahazi n'ọkwá ma ọ bụ ọkwa na-abịa mgbe ị na-arịgo usoro ndị isi nke otu, ha ga-adị oke ọnụ ma ihe ndị ahụ na-adịwanye mfe ị na-enwetakarị ọrụ ọzọ. emeputara ha site na ihe ndi ozo ma ndi ozo gha adi nma ugbua ugbua ma anyi abanyela ugbua na uzo ndi ozo di ala na ndi isi, ihe omuma a nke Shimano Sora, nke bu uzo nke abuo nke Shimano. a na-ahụkarị igwe kwụ otu ebe gburugburu mkpado ego £ 500, Shimano Sora nwere ike ịkwaga ndị otu na-aga n'ihu n'ihu igwe kwụ otu ebe ya nwere Shimano na edere m ya ugwu n'ime m o r Carall ebe m na-agba ịnyịnya ya agbụrụ ole na ole mana otu n'ime ihe ị ga-eburu n'uche bụ oke gia nke groupet. Igwe kwụ otu ebe a nwere kaseti 1132 na azụ nke m ga-akwado maka igwe kwụ otu ebe mbụ gị na ihe kpatara ya. nke ahụ bụ na 32 ezé gia na azụ nke cassette bụ n'ezie bara uru maka Ugwu bụ.
Nke a pụtara na site na ịgbanye ụkwụ gị karịa, ị nwere ike ịnweta ọkwa dị elu karịa na ọ ga - eme ugwu ka ọ dị ntakịrị. Nke a dị iche na ụfọdụ anyịnya igwe na-abịa na ubé ike cassette: 28 ntị na yinye set now nwekwara dị iche iche nha nke yinye mgbaaka, ihe m ga-akwado maka gị mbụ ụzọ igwe kwụ otu ebe bụ kọmpat yinye setịpụrụ na a 50:34 dị ka anyị nwere ya ebe a na maka otu ihe ahụ m ga - akwado 32s, azụ ahụ na - eme ka ugwu nta dị mfe ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido. Naanị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-amalite ụzọ biking ma chọọ ịnwe mgbatị nke nwere ike inyere gị aka ịrị ugwu ndị ị chọrọ, nnukwu azụ na obere azụ ntas ndị a kpọtụrụ aha na-abụ akụkụ nke ìgwè ahụ ma n'ozuzu ya, e nwere ụdị brek abụọ dị iche iche dị ka ị pụrụ ịhụ na igwe kwụ otu ebe a na brekị na breeki ndị a na-efu obere karịa rim brek mana gịnị ma ọ bụrụ na ibi ma ọ bụ ga-aga ebe ugwu? na ugwu ugwu m ga-asị na ha bara uru maka mgbatị ahụ n'ihi na ha na-enye breeki siri ike karị, nke na-adịgide adịgide karị na mmiri mmiri ma n'ozuzu ha nwere njikwa ka mma. Ekwesịrị m ikwusi ike na brek brek na-eji ha eme ihe zuru oke. iji merie Tour de France maka afọ 100 ma ha nwere uru nke ịdịtụ ọkụ karịa breeki ndị a dịka ihe eji eme ụlọ ahụ nwere nnukwu mmetụta na ogo ogo nke igwe kwụ otu ebe na ihe ndị kachasị ewu ewu Aluminom Nchara na carbon eriri si gburugburu 250 ka 1,000 pound euro na dollars, ọtụtụ n'ime anyịnya igwe ị nwere ike ịhụ na-mere si aluminum alloys na nke ahụ bụ oké n'ihi aluminom bụ a nnọọ vasatail ihe onwunwe na bụ fechaa na-enwe ezi ike-na-arọ ruru, na ihe mere mgbe eji na ụgbọelu, ọ na-eguzogide ọgwụ na-emebi emebi ma nwee ike ịdị na-efu nke ukwuu karịa eriri carbon nke pụtara na igwe kwụ otu ebe nwere ike ịghọ ihe karịrị otu puku euro karịa ọnụ. ị malitere ịhụ igwe kwụ otu ebe carbon-fiber dị ka vanreisel edr 105 ma ọ bụ abụ abụ, dị ka ha na-ekwu n'ihu, ebe anyị nọ ugbu a.
Carbon fiber na-adịkarị mfe ma sie ike karịa aluminom na nchara maka ọdịdị ka mma carbon fiber bụ nnukwu ihe maka ịme ịnyịnya ígwè ma ọ bụrụ na mmefu ego gị anaghị ejupụta eriri carbon na-echegbula onwe m na ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ m bụ aluminom mana ezigbo njirimara bụ Aluminium igwe nwere ahihia nke Carbon nke a na-ebelata ibu nke a na-eme ka ndu ya sie ike karie ya ma o na-ebelata uzo uzo ma na-agbacha site na aka na-ahọrọ akara a ma ama bu ihe kwesiri ka ị mara na e mebere ya ma nwalee ya. a siri ike akwụkwọ ikike agwụ na etiti na ndị bara uru na-achọ bụ ndị taya nwechapụ ihe ndị merrier m ga-ekwu dị ka nke a na-enye gị ukwuu egosipụta. You nwere ike ịdaba na taya sara mbara ma ọ bụrụ na-amasị gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ụzọ ndị furu efu ma nwee obere njem ị nwere ike itinye ihe dị ka mudguards, akpa akwa na otu ngwa ngwa ndị ọzọ yana nkọwa zuru ezu na etiti ahụ bụ nkwado ala - ndị a bụ biarin nke nke igwe kwụ otu ebe na igwe na-agba n'èzí na-enweta akara ego na akwụkwọ m n'ihi na ndị a na-achọ obere ndozi ma na-adịru ogologo oge. Ana m agwa gị ugbu a gbasara wiil Imean dị ka ụdị isi akụrụngwa na ịnyịnya ígwè ọ bụla, ugbu a, igwe kwụ otu ebe na-abata na-abanyekarị n'ogo ụkwụ na-abanye n'ihi na ọ bụ ihe kachasị ewu ewu na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbadata ala ahụ. Ha na-abanyekwu n'egwuregwu ahụ ma gbanwee ha maka ihe dị mfe, nke siri ike, na ikekwe karịa aerodynamic, ma na ndị a mma arụmọrụ àmà na wiil tinye na-eri na Ya mere na-d The ala price ma ọ bụ ntinye-larịị anyịnya igwe na-abịa na a dị mfe wheel, ma ọ bụrụ na ị na-achọ wiil gị bi ke na-achọ na ihe m na-atụ aro, a n'ezie elu anwụrụ ọkụ nọmba dị ka nke a na-enyere aka na-wheel ike na ndị ọzọ siri ike m ga-atụ aro ka ị na-ele anya na rim obosara. N'ikpeazụ ị chọrọ rim ndị kwesịrị ekwesị maka wider na taya, otú a ubé wider rim obosara dị ka 25mm taya ma ọ bụ 28mm taya na-enye a obere ihe nkasi obi, a nta ọzọ adịgide na ha nwekwara ubé ala Rolling eguzogide, nke pụtara na ị nwere ike nọkwasị otu ọsọ na a obere obere mgbalị.
Ugbu a, m ga-enye gị ụfọdụ ozi ndị ọzọ dị mkpa ịchọrọ ịma mgbe ị na-azụ ụgbọ ịnyịnya ụzọ mbụ gị. A na-eji igwe eji eme njem eji ejiji eme ihe, nke pụtara na ọ bụ ihe dị mma maka ha inwe ahụ erughị ala na-enweghị obere akpa, na sadulu. nkasi obi dịkwa oke onwe ya Ya mere, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ndị na-agba ịnyịnya ịgbanwe ihe mgbe mgbe. Ọtụtụ ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ anaghị abịa na pedal, ọ bụ ezie na ụfọdụ igwe kwụ otu ebe nwere ihe ngosi pallet.
Kedu ụdị agbụrụ ịgba ọsọ?
Ndị 13Ngwongwo kacha mmaka Nab All Wins
Kacha mmaAjịrịja nkumeIgwe kwụ otu ebe. Viathon G.1 RED AXS. viathonbicycle.com.
Kacha mmaOkirikiriIgwe kwụ otu ebe. Cannondale Super X. cannondale.com.
Kacha mmaEnduroIgwe kwụ otu ebe. Mondraker Foxy Carbon RR. mondraker.com.
Kacha mmaAeroGba ígwè. Osimiri Canyon Aeroad CF SLX Disc 9.0 Di2. kani.com.
Kacha mmaNkwụsịtụ zuru MTB. Pụrụ iche Epic Pro.
Eprel 14 2020
O doro anya na anyị na-ele mmadụ anya n'ihu, mana ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị atọ ụtọ iji chụsoo ebumnuche ịgba ọsọ, duels ugwu na agbụrụ ndị na-agba ọsọ ọsọ, ọ bụ obere egwuregwu ọhịa mgbe ụfọdụ, nke bụ akụkụ nke amara ya, ọ dịkwa adịghị amasị ihe ọ bụla ọzọ si n'ebe E nwere ihe ole na ole dị mkpa, ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ịghọta ọduọ, taa, anyị na-aga na-aga a ole na ole kpọmkwem ka i nwere ike n'ezie ịghọta mma nke ịgba ígwè na ya niile ebube, ọ na-akọwa ihe mere ọduọ gbanwere n'ụzọ ụfọdụ, Drafting, kwa Mara nke ọma dị ka na-agba n'azụ ọzọ onye na-agba mgbe ha ihu ọma agbaji ifufe na slipstream, na dọrọ nke onye na-agba ha n'azụ na-ebelata site 25 ka 50 percent. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịgbaso onye na-agba ịnyịnya ígwè ọzọ na-azọpụta gị ọtụtụ ike, ọ bụ ya mere na ị na-ahụ na ị bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị na-ekerịta nkuku n'ihu mgbe ha na-agba ọsọ, ọ bụ ya mere ndị otu ji nwee ọtụtụ ri iji kpuchido onye ndu ha n'oge ịgba ọsọ igwe. nwere ike ịlụ ọgụ mgbe niile iji zoo ifufe ma chekwaa ike gị karịa ndị na-asọmpi gị ka ị nwee ike iji ha mgbe ịnwere ha chọrọ ọtụtụ ihe dị na ebum n'uche. Dị iche iche si eme na usoro na-eji zoo miri emi na peloton na gị otu bụ na-edu ndú, nke mere na ị pụrụ ịnọdụ ala n'azụ ha na a mgbe nile ijeụkwụ ma ọ bụ nanị ịjụ na-abịa n'ihu na-eme ka ị na-ike gwụrụ ma ọ bụ na-ewere obere oge iji rie ma ọ bụ drinkụọ ihe ọ tactụ isụ bụ ụzọ aghụghọ na-esote onye na-agba ịnyịnya ọzọ na-echekwa ụda ike will ga-aghọta ngwa ngwa ọtụtụ mgbagwoju anya nke ịgba ịnyịnya ígwè, ịgba ọsọ na-adị ka anụ ọhịa na TV ma ọ bụ ọbụna ihe dị egwu na ndụ n'ezie Ndị na-agba ịnyịnya ebe niile dị oke ọsọ nye a otutu ugwu ka n'isi akara ama na e nwere bụ naanị a otutu grrr mgbe ị na-esi n'ebe ahụ, Sprint mgbe ụfọdụ na-amalite ogologo oge tupu ọgwụgwụ akara ruo 50 kilomita site na imecha mgbe ìgwè na-amalite na-ahazi na nweta ọnọdụ dị mma maka kilomita ikpeazụ ọ bụla onye ọkwọ ụgbọala nwere ọrụ ọ bụla ebe ọ ga-anọ n'ihu K otu otu chọrọ ịmalite n'oge n'ihi na mbọ niile dị mkpa, yabụ onye ọ bụla na-anwa ichere ogologo oge o kwere mee tupu ya eruo nkwụsị t o jisie ike ka ọtụtụ ndị na-agba dị ka o kwe omume ọhụrụ maka akara ọsọ ka ije ahụ na-aga kilomita ole na ole gara aga tupu agba ọsọ ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ dịka anụ ọhịa wolf na-agba ọsọ n'isi ndị otu ngwugwu ahụ, ndị ọkwọ ụgbọ ya na-apụ apụ na 10. inwe ike ịnọ n’elu 20 ma eleghị anya ọbụlagodi 30 sekọnd ka ha na-adapụ ma na-esure ha n’otu n’otu ruo mgbe onye gbara ha ga-abụ nanị fọdụụrụ mgbe ha bidoro ịgbaru.
Enwere olile anya na ndị otu ahụ nyere oge ahụ n'ụzọ zuru oke, ọ bụghị nke tere aka na njedebe, yabụ ebe a ọ na-enweta ọtụtụ ihe mgbagwoju anya maka abamuru nke onye ọkwọ ụgbọ ala n'azụ anyị gafere ya, mana na crosswinds ebe ikuku na-abịa site n'akụkụ na ọkwọ ụgbọala na-amalite ịkpọgharịa, ha na-akpọ oge a na ihu ọma ọ pụtara na ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ebe obibi ị ga-anọdụ ala n'azụ onye ọkwọ ụgbọ ala n'ihu gị ma n'akụkụ n'akụkụ n'ihi na ifufe na-esi n'akụkụ ahụ abịa n'okporo ụzọ ahụ dị n'obosara na nke ahụ pụtara na mgbe ụzọ mepere emepe kpamkpam, 10 nwere ike ịchọ ndị ọkwọ ụgbọala iri na ise na-achọ ebe obibi, mana ndị ọrụ ndị ọzọ ga-etinye nnukwu ike ma ọ bụghị na ha ga-ada ma ọ bụ na ha nwere ike ịga na ụgbọala apụ a ọhụrụ ijeụkwụ akara n'azụ a ijeụkwụ akara ya mere ha ihu ọma nwere na-arụ ọrụ ọnụ na-elu na mgbe ha na-enweghị chi na mgbe ihe na-esi ike ngwa ngwa, n'ihi ya na-ata ahụhụ na gọta-abịa na Oge ọzọ ị na-ahụ a agbụrụ kewaa iji wuchaa akụkụ ị ga-ama ihe kpatara f inish line bụ doro anya ebe ndị mmeri meriri, mana na mmalite nke agbụrụ ahụ enwere isi ihe ebe ndị na-agba ịnyịnya ga-ejide ihu anọ nwere nkuku na ụdị mpempe okporo ụzọ niile, enwere ike ịnwe usoro egwu, ndị a niile bụ ihe kpatara ndị agbụrụ ji chọọ ibute ụzọ iji zere ihe ọghọm na ịhapụ ìgwè mmadụ ahụ dị ka nnukwu eriri dị ogologo na-agba ọsọ n'azụ oge ndị ahụ Ọ bụghị naanị na ị ga-ada n'ụzọ n'azụ otu ahụ, mana ị ga-enweta whiplash ahụ ma ọ bụ yo -i na-enwe mmetụta ebe peloton na-agbasawanye na nke ahụ pụtara na ị ga-etinye ike dị ukwuu iji laghachi na iji ihe ndị a na-aga n'ihu n'ihu Ọ bụ ya mere agbụrụ ahụ ji amalite na mberede n'etiti agbụrụ ma ọ bụ ọkwa nke ndị otu na-emegide nke ọ bụla ọzọ Nke a bụ nkà maka ndị na-ahụ maka otu onye na-agba ịnyịnya onye maara ebe isi ihe ndị ahụ nwere ike ịga n'ọsọ ahụ, nke mere na ndị okenye, ndị nwere ahụmịhe karịa nwere nnukwu uru na ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara, ọbụlagodi mgbe anụ ahụ adịghị oke oge ka bụ agbụrụ winn er na-eburu nnukwu ihe nrite, n'ezie, mana enwere onyinye ndị ọzọ e na-enye ndị na-agba ọkwa dị iche iche n'ime agbụrụ ahụ n'ọgba ọsọ ọtụtụ ụbọchị ị ga-eyi uwe ma ọ bụrụ na ị na-eduga ụfọdụ nhazi ọkwa. dịka ọmụmaatụ, njem defrancedas bụ njiri mara agba nke onye na-agba ịnyịnya n'elu nhazi ọkwa ugwu, mana enwere akwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, isi ihe nke ọkwa ọkwa, enwere agba ọcha maka ọkwa ọkwa onye na-eto eto wee nwee akwa edo , nke bụ onye ndu nke agbụrụ na giro italia na-amata ọdịiche dị na mbụ enwere ọbụna jersey maka ndị ọkwọ ụgbọ ala nke ikpeazụ anyị agaghị echefu mba Champs ndị a bụ akara aka pụrụ iche nke enyere ndị ọkwọ ụgbọ ala na-emeri aha mmeri ha. nke bụ agbụrụ otu ụbọchị na naanị ndị ọkwọ ụgbọala si mba a na-anya isi ebe ha nọ ọnụ, yabụ, ịnọchite obodo gị n'ọkwa kachasị elu, iyi uwe a bụ ihe nrite ihe nkwanye ugwu na-adịghị eji egwu. Ugbu a, anyị enweghị ike ichefu uwe elu World Cup ma ọ bụ, nke nwere ike bụrụ uwe kacha ama ama na peloton niile. The jersey bụ mgbe na-acha ọcha na egwurugwu mpe mpe on the chest, win the world Championship is easily and eleghị anya ndị kasị prestigious award na niile ịgba ígwè na mpụga nke a nnukwu tour.All ndị a jerseys-eme ka a mara ezigbo mma pelotongiving agbụrụ maka ọkà okwu na Fans ihe anya na na-ekwu okwu maka afọ ndị na-abịa Ikekwe ị nụrụ ugbu a okwu domestique, n'ihi na ihe atụ, ndị Canada onye na-agba Michael Woods naanị nso nso wee na. bịanyere aka na teamisrael mmalite mba dị ka chris froommultiple tour de france onye mmeri na stageraceras super domestique ya maka oge na-esote nke ahụ apụtaghị na Woodsy ga na-agba gburugburu na Chris na-asa akwa ahụ n'ụlọ otu onye ndu chọrọ enyemaka ntụkwasị obi na ha nwere ike ịdabere na agbụrụ na na Nnapụta na n'ụlọ agaghị ewepụ ha ifufe ma nyere ha aka n'ụzọ akọ n'oge agbụrụ ahụ, mgbe ụfọdụ na-ekpuchi mmegharị na mmegharị, dịka ọmụmaatụ Super Domestiques ga-abụ ezigbo ọkwọ ụgbọ ala dịka onye isi otu ha, ha anaghị eme ya nwere ịgbalịsi ike maka mmeri na njedebe nke ogbo ahụ nke nrụgide Dodge ka ọ bụrụ izugbe Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịdị ukwuu mgbe ụfọdụ ga-eri ike nke ike ebe ndị isi agbụrụ na-echekwa ya, ha na-ebu karama nri, ha na-akwụsị ọbụna na ụlọ mposi na ndị na-eduzi gcm ha na-eduzi n'oge ụfọdụ, bụ ezigbo ndị ezinụlọ n'ihi ya, anyị maara otu ihe ma ọ bụ abụọ banyere Besor gen nke karama na ịrụsi ọrụ ike na agbanyeghị ebube na ọrụ a mana ọ bụrụ ị na-eme ya nke ọma na ị ga-enwe ọrụ ogologo na ọfụma na peloton na uwe ogologo ọkpa na ihe niile siri ike banyere egwuregwu banyere Cycling International na nke a bụ mkpakọrịta egwuregwu ha na-ede iwu niile ma lekọta agbụrụ a na-eduzi ma jide n'aka emeela ya nke oma.
Otu n'ime iwu ha bụ na ịnweghị ike iyi sọks nke gbagote karịa etiti nwa ehi gị. Mgbe ị na-agba ọsọ enwere ihe kpatara iwu ụfọdụ, mana enwerekwa ihe ndị kpatara ejiri aka chee echiche mana ọ na-egosi na ọ bụrụ iji nwee obi ụtọ ịgba ịnyịnya, ịkwesighi ịghọta ụfọdụ esemokwu nke ịgba ịnyịnya, oge a na-egbutu na ịgba ọsọ Ọ dị ezigbo mkpa ịghọta na ọ na-adịkarị n'etiti 10 na 25 nke oge onye mmeri, yabụ enwere obere nchekwa nke na-adịkarị ihe dị ka 25 ruo 50 nkeji nke oge ọzọ mgbe onye mmeri ahụ gwụchara n'èzí nke nchekwa ahụ I mere agbụrụ na nnukwu njegharị na-abụghị oge nke mere na ndị otu ikpeazụ na-elebara nnukwu ugwu anya oge ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị na-agba ọsọ ga-abụ b
O siri ike dịka ndị isi ga-agbaru n'ime oge ahụ, ma ọ bụghị ya, ha ga-agabiga ọsọ ahụ ma gharazie isonye na agba ọsọ n'agba egwuregwu ahụ. Ugbu a, anyị kwesịrị ikwu maka ndị gbapụrụ ọsọ, ndị na - agba ọsọ bụ ndị otu obere ndị na - agba ọsọ na - agbapụ na mbido agbụrụ ahụ ma na - agba ọsọ maka ọtụtụ ụbọchị tupu ụfọdụ ndị na - achụ ọsọ na - ebupụ mgbe ụfọdụ, nkwụsịtụ na - eme maka ọtụtụ ihe kpatara ya, mana imirikiti n'ime ha bụ ndị na - ekpe ikpe oge na ndị otu na - achọ mgbasa ozi site na ịga n'ihu wee nweta oge TV ka igwefoto na - agbagharị na peloton ndị ọzọ dị n'okirikiri na - enyere aka ịnwe ọsọ n'ihu agbụrụ ahụ ruo nwa oge nke mere na ndi otu na-achịkwa oso ahu nwere ike. A na-ajụkarị ọgụ, ebe ndị otu na-aga n'ihu na-aga n'ihu, ndị otu a na-agakarị n'ihu, mana ha agaghị ewepụ brek n'oge na-adịghị anya, ọ nweghị onye chọrọ ịwakpo ma ọ nweghịkwa ala mmadụ n'etiti izu na peloton, n'ihi na nke ahụ bụ n'ezie ihe efu nke ike na N'ezie breaka ụzọ mgbe ụfọdụ adịghị nwude na akara na ha were ya na ihe mgbaru ọsọ maka nnukwu mmeri site n'aka onye na-adịkarịghị ga-atụ anya mmeri na ụbọchị, n'ihi ya, anyị nwere ikwu banyere iwu a na-edeghị ede na peloton na-agba ịnyịnya ígwè na-aga nke ọma, ka anyị kwuo n'ụzọ nka ihe megidere iwu ndị anyị nụrụ na mbụ banyere sọks, nke jọgburu onwe ya, mana ndị ahụ nọ na akwụkwọ iwu, mana mgbe ahụ enwere ọtụtụ ihe anyị kwesịrị ile anya n'okpuru ọnọdụ Afanyekwa mgbe ihe ndị ahụ bụ a gbara si azụ nke a otu ụgbọ ala, nyochawa ọ na-amachibidoro, ma ọ bụrụ na ị dara ma ọ bụ a sc Ọ bụrụ na ị nwere ogbenye arụzi, ọ mara mma ngosi na-atụle dịkwa mma site ndi otu nile Mee iwu ma oburu dị mkpa, Otú ọ dị, ndị kasị nwee ahụmahụ na-agba ịnyịnya na peloton ma ọ bụ otu na-aghọ unofficial olu nke peloton ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu okuku a onye na-agba na-mgbe ụfọdụ ịkwụsị a agbụrụ iji jide n'aka na onye ọ bụla na-emeso na dịkwa mma ndị ọzọ na-ga-mgbe ụfọdụ inyere agba na nsogbu ma nye ha kalama ma ọ bụ dọrọ ha laghachi n'ime otu ma ọ bụrụ na a na-ewebata ha otu ọ bụrụ na ị? kpụ azụ m azụ, akpachara m ndị enyi gị ịgba ịnyịnya ígwè na-atụ anya na nke a ekpochapụla ụfọdụ nuances na peculiarities nke ịgba ígwè.
N’ime ịkwụwa aka ọtọ ọ nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya ma nwee olile anya na nke a emebighị ihe. Gba ịnyịnya ígwè bụ egwuregwu anụ ọhịa kpamkpam mana ọ bụrụ na ị nweta ya ọ kachasị mma ma na-atọ ụtọ ile anya mana anyị ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị, mee ka anyị mata n'ihe ị mụtara n'isiokwu a ihe ị chere na ọ maghị ihe ị nwere ike ịmata maka isiokwu ga-eme n'ọdịnihu, hụ gị oge ọzọ
N'isiokwu a, anyị ga-agabiga ụfọdụ n'ime ndị kachasị mma ugwu oge niile. Ndị na-agba ịnyịnya nwere oke ike-ibu-ibu ndị ọkachamara n'ịrị ugwu na ọsọ ọsọ dị egwu. (Booming) Anyị siri n'ụzọ anyị chịkọta ndepụta nke asaa kachasị elu oge niile, mana dịka ị nwere ike iche n'echiche, igbutu ya na ọnụ ọgụgụ ahụ siri ike, yabụ tupu anyị amalite, enwere m nkwupụta na m ga- gụa ngwa-ngwa.
Nke mbụ, enwere ihe karịrị afọ 100 nke ịgba ọsọ dị egwu, ntachi obi na ike egwuregwu. Ọ bụrụ na anyị jigidere ndị ọkwọ ụgbọ ala asaa, a ga-ahapụrịrị ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala dị ukwuu. Na mgbakwunye, iji ọgbọ atụ atụnyere bụ ebe a na-egwu ala.
Ọ gaghị ekwe omume ịmata etu Chris Froome ga-esi megide Eddy Merckxor ma ọ bụrụ na Pantani Coppi adapụ - akụrụngwa agbanweela, ịgba ọsọ agbanweela, okporo ụzọ agbanweela na ebe dịkarịsịrị mma karịa gravel ụzọ taa 1920s. Ọzọkwa maka nnukwu akụkụ nke akụkọ ihe mere eme egwuregwu enweghị ọgwụ ọgbụgba. Ozugbo ngagharị ahụ gwụchara, ka anyị bido. Nọmba otu na ndepụta anyị bụ Marco Pantani.
Otu n'ime ndị kasị pụrụ iche ugwu nke ya ọgbọ. Ugbu a ndị havetali nwere okwu maka onye na-arị ugwu na nke ahụ bụ Scallatore, aha ọzọ maka ndị na-arị ugwu dị ka Pantani, nke ahụ bụ Scatista. Nke a bụ okwu maka ndị na-arị ugwu nwere ike ime ngwa ngwa ọbụlagodi na ndagwurugwu dị elu ma na-egbutu ndị na-ama ha aka.
Ugbu a Pantani na-achọpụta ya ozugbo site na isi nkwọcha ma ọ bụ mkpuchi isi, ntị na ntị na goatee a na ọdịdị ya wee nweta ya aha otutu, el pirata ma ọ bụ paireti. A makwaara ya nke ọma maka ụdị ịrịgo ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile site na sadulu na tụlee. Mana ọ bụghị ọdịdị ya ma ọ bụ ụdị ịrịgo ya.
Ihe mere o ji dị ukwuu bụ na ọ rịgoro ugwu dị ka a ga-asị na ọ nọ naanị ya. Ọ bụ ikike a mere ka ọ nwee ike inweta akara ngosi dị egwu nke Tour de France na mmeri Giro d'Italia n'otu oge, laghachi na 1998. N'afọ sochirinụ, na 99, ọ chịkwara Giro d'Italia ọzọ, na-emeri ebe anọ ma na-eduga agbụrụ ahụ, mana mgbe ahụ, dị ka mmịnye ọbara Mgbe ikpe ahụ laghachisịrị, hematocrit ya dị oke elu wee chụpụ ya n'ọsọ ahụ.
Pantani abụghị otu onye ọkwọ ụgbọala ọzọ ma ọ dị nwute na ọ nwụrụ na 2004 nke nnukwu nsị cocaine. (egwu na-ada ụda) N'oge a, Chris Froom na-achịkwa Grand Tours. Ruo ugbu a ọ merie Tour de France ugboro anọ, merie Giro d'Italia na 2018 wee merie Vuelta a Espana, ugbu a ugboro abụọ.
Ozugbo ihe gbagoro, Chris Froome yiri ka ọ nwere uru. Ọ bụ na Kenya ka Froome mụtara site na ọkwa ugwu ya, onye kwuru na ya nọrọ ogologo oge n'ugwu Nairobi. Mgbe ụfọdụ ọ na-ama ụlọikwuu n'ebe ahụ.
Ma nkwa ya na isi ike ya abụghị naanị na igwe kwụ otu ebe, kamakwa anya. O doro anya n'otu oge ọ jiri akaụntụ Hotmail nke Kenya Cycling Association zigara ndị otu egwuregwu egwuregwu, UCI, na-agwa ha na Kenya ga-eziga otu U23 na World Championship. Ugbu a enwere m ike ikwu n'ụzọ doro anya na ụdị Froome na-agbago na isi ya na ikpere aka ya adịghị mma. Nke mbụ a bịara mara na Vuelta a España na 2011, ebe ọ malitere nke abụọ, mana ọ mechara bụrụ onye mmeri nke agbụrụ ahụ kwalitere. .
N'afọ sochirinụ ọ nyeere Bradley Wiggin aka inweta aha 2012 Tour de France, na-emecha nke abụọ na usoro ahụ, mana ọ bụ na 2013 ka o mere aha maka onwe ya. Ọ nweghị ike ịkwụsị mmeri nke Oman site na mbido afọ a. Ọ nọ na Critérium International, Tour de Rome ma mee Critérium du Dauphiné na n'ezie Tour de France.
N'ezie, ọ bụrụ na ị wepụ Lance Armstrong na akụkụ ahụ, n'afọ na-eso ya ọ ghọrọ onye mbụ na-agba nke ọma iji chebe aha ya nke ọma kemgbe Miguel Indurain na 1995. O nwetela njem abụọ ọzọ nke Fra nce, na afọ gara aga wee bụrụ onye mbụ na-agba ịnyịnya jigide aha Grand Grand atọ niile n'otu oge ahụ kemgbe Bernardino 1983. (egwu egwu) enweghị ike ịnwe ndepụta nke ndị kasị ukwuu n'ụwa na-enweghị ya Federico Bahamontes.Ọ ghọrọ onye na-agba mbụ na akụkọ ntolite iji nweta ọrụ atọ ahụ o meriri asọmpi Eze ugwu na ugwu atọ niile a.
E nwekwara ihe ncheta nke Bahamontes dị na Toledo, nke Fundacion Sulest nyere site na ya iji gosipụta na ịsọpụrụ ihe niile ọ rụzuru na igwe kwụ otu ebe. Ọ ka na-arị elu ruo taa. Kedu akụkọ akụkọ akụkọ zuru oke. (egwu na-ada ụda) Naanị ndị na-agba ịnyịnya abụọ na akụkọ ntolite enwetala mmeri nke Eze nke Ugwu na njem atọ a dị egwu, yabụ ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ha abụọ.
Gaa n'ihu, Luis Lucho Herrera. Ọ nwere ike karịa ụfọdụ n'ime oge dị egwu, gụnyere Sean Kelly, Bernardino na Laurent Fignon. Na 1984 ọ nara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmeri kachasị mkpa maka ịgba ịnyịnya Colombia, ọ bụ ya mbụ Tour de France, ọ bụ 17th ogbo ọ kwụsịrị na Alp d'Huez.
N'ebe ahụ, ọ wakporo ndị na-asọ mpi ya ọzọ, merie ebe ahụ ma werekwa oge zuru ezu ịghọ onye mbụ Colombia na-agba ịnyịnya na-edu ndú na Grand Tour. O siri ezigbo ike ikwubiga ókè Herrera dị mkpa na ịgba ígwè Colombia. N'ụzọ bụ isi, otu ndị Colombia na-arị elu ugbu a na-agbaso ụzọ o jere maka ha na 1980s. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Nwoke a nwere ike ịbụ ezigbo esemokwu maka ịbụ onye na-agba ọsọ Spanish kacha mma n'oge niile, mana ọ bụghị maka mmeri 1973 Tour de France ma ọ bụ 1970 Vuelta ka Ocana mere ndepụta anyị.
More n'ihi na ọ na-eme ihe ike mgbe ọ wakporo Jose Manuel Fuente site na Col du Galibier na Col du Télégraph wee nweta minit asaa na ndị ha na ha kacha ike. Otú ọ dị, maka m, ọ bụ na 1971 ka o mere ka ọkwá ya dị ka akụkọ akụkọ ịrị elu. N'ikpeazụ, ọ ga-agbaji na uwe edo edo.
Mana njigide ya amaliteghị ruo na agba asatọ, nke kwụsịrị Puy de Dôme. N'ebe ahụ ọ hụrụ ihe ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ na-anaghị ahụkarị, na Eddy Merckx adịghị ike. Ọ wakporo wee gaa na Windsor ogbo, ọ bụ ezie na ọ gwụchara 15 sekọnd na Merckx, nke ahụ bụ isi ihe ịrịba ama nke ọdịnihu.
Onye mmeri nke Tour de France nke oge Louison Bobet kwuru na ihe ọ na-eme na ọkwa a dị ka ọfụma ọ bụla nke Fausto Coppi. Nke a bụ ezigbo ugwu. (upbeat music) N'uche nke m, onye ọ bụla na-agba ịnyịnya tosiri iji kpọọ aha 'Angel of the Mountains' kwesịrị ka ọ nwee ntụpọ na ndepụta a.
Charly Gaul bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè si Luxembourg bụ onye gbara ugwu maka oge mbụ na 1950 na Tour nke Austria. Ọ dị naanị afọ iri na asaa mana ọ meriri ogbo na Grossglockner na-aga n'ezie dịka atụmatụ, ọ hapụrụ ọtụtụ n'ime ha, mana ọ bụ 1955 na o tinyere nwamba ahụ n'etiti nduru. Ọ bụghị nnukwu na ulo, nwere obere n'ihi otu ọmarịcha otu egwuregwu, mana ozugbo ọ gara n'ugwu na ugwu ugwu ọ bịara uru ya.
Onye mmeri Louis Bobet. Ihe ndị ahụ rụpụtara ka ọ nwee mmeri ọ bụla na asọmpi Eze nke Ugwu na nke atọ na ikpo okwu, nke ahụ bụ naanị otu ihe atụ nke otu Charly Gaul ga-esi nwee nnukwu mbịaghachi ka ọ gara ugwu maka ndekọ maka ịrịgo Mont. Ventoux, otu elekere nkeji abụọ na sekọnd itoolu, ma na-eche na elu ahụ adịghị mma n'oge ahụ, ọ dị ezigbo ịtụnanya na ọ were Jonathan Vaughters afọ 31 imebi oge ahụ. Anyị nwere onye ọkwọ ụgbọ ala, onye meriri ọkwa ugwu ugboro atọ na na Gira Rosa ma meriekwa Grand Booke ma bụrụkwa nke GCN kachasị ọsọ na oge niile. N’ezie, a na m ekwu maka Emma Pooley.
Ugbu a, otu n'ime ihe ịga nke ọma ọ na-enwe na Giro Rosa 2014 laghachiri. E nwere ugwu ato gbagoro n’afọ a, tinyere ndị bịara n’ọgbakọ dị iche iche na nke asatọ na iteghete, na Emma meriri ha niile. O meriwo Taiwan KOM Challenge ugboro abụọ, nke gwụchara na 3,275 mita n'elu A larịị na Wuling Pass.
Na 2017, o tinyere ego 16 nkeji na onye ya na ya kachasị nso na nkeji 20 na Si 'Richardson, ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na ọ bụ ọmarịcha ugwu. Ezie na ọ bụghị afọ ojuju na naanị ịbụ a oké climber na a igwe kwụ otu ebe, ọ mara mma darn ọma na anyịnya igwe, kwa. Ọ na-ekere òkè mgbe niile na ugwu ugwu ma merie ọsọ Alpe d'Huez ogologo oge gara aga ma na-ekerekwa òkè na mmemme ugwu.
Dị ka anyị kwuru na ngosiputa na mmalite nke isiokwu a, ọ na-esiri ike iwepụta ndepụta nke asaa kachasị mma ugwu oge niile. Ekwenyesiri m ike na anyị hapụrụ ụfọdụ ọkacha mmasị gị ma ọ bụrụ na anyị nweta ohere, mee ka anyị mara na nkwupụta ndị dị n'okpuru. Mana ọ siri ezigbo ike iji ndị ọkwọ ụgbọala tụnyere oge dị iche iche.
Agbanyeghị, anyị nwere data GPS ugbu a. N'ime afọ 50, anyị nwere ike iji ndị ọkwọ ụgbọala niile tụnyere afọ 50 sochirinụ, nke ga-adị mma. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị uwe mwụda Spanish a m na-eyi ugbu a ị nwere ike ịhazi ya ugbu a site na atshop.globalcyclingnetwork.com Enwere njikọ ya na nkọwa ahụ n'okpuru isiokwu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ. na-amụta otú e si eme ya can pụrụ ịmụta otú ịrị nnọọ mma onwe gị si Emma Pooley! Isiokwu gị dị n'okpuru ebe a.
Kedu ọsọ ọsọ igwe kachasị n'ụwa?
Tour de France bụ nke siri ikeagbụrụn'imeịgba ígwè, ma obuna ihe ngosi ichoro anya nke French gha aghapu okpu ya na Trans-Siberian Extreme - nke kachasi eluagbụrụ igwe na ụwa.Ọgọst 13 2018
Kedu ihe bụ onye na-agba ịnyịnya 3?
Kwaga naNwamba. 4 kaNwamba.3, onye na-agba ịnyịnya nwere ike ime nke ọ bụla n'ime ihe ndị a: Mpi na agbụrụ iri abụọ na ise tozuru oke 10 kacha elu-10 mechara na mpaghara nke 30 ma ọ bụ karịa ndị na-agba ịnyịnya, ma ọ bụ 20 ngwugwu na-emecha na ubi nke ihe karịrị ndị na-agba 50. Chịkọta ihe nkwalite 20 na oge ọnwa 12.
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji agba ịnyịnya ígwè mgbe ha gbasịrị ọsọ ndụ?
Ọ na-emekwa ka mgbasa nke okpomọkụ. 'Na mgbakwunye na mgbake anụ ahụ, ịjụ oyi na-enye ohere iji uche zuru ike pụọ na nrụgide nkeọduọna iji na-atụgharị uche naagbụrụ. Flors kwuru, sị, 'Ngwa nke cooldown ahaziri ahazi gbara ya gburugburu. Nọvemba
Kedu onye na-agba ịnyịnya Italiantali kacha mma n'oge niile?
1. Fausto Coppi (1919 - 1960) Site na HPI nke 73.19, Fausto Coppi kachasịama Italiantali Cyclist. A sụgharịala akụkọ ndụ ya n'asụsụ 49 dị na wikipedia.
Denmark. Denmark na-ewerekarị okpueze maka ịbụ ihe kachasị mmaobodon'ụwa n'ihi nandị na-agba ịnyịnya ígwè,, ka ọ na-aga n’ihu na-eme ihe dị mkpa iji tinye njikwa n’elu igwe na-aga. Obereobodoobụrede mbụre karịrị 12,000km nkeokirikiriụzọ gasị, yana raara onwe ya nyeịgba ígwèàkwà mmiri ndị dị n’obodo ndị dị ka isi obodo, bụ́ Copenhagen.31.05.2018
Kedu agbụrụ kasị dị ize ndụ?
International Isle of Man TT (Ndị njem nleta)Agbụrụbụ ọgba tum tumọduọihe omume emere na Isle nke Mmadụ nke bụ kemgbe ọtụtụ afọọtụtụọmarịcha ọgba tum tumagbụrụn'ụwa ma na-anọgide na ọnụ ọgụgụ naagbụrụ kasị dị ize ndụn'ụwa.
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida afọabụba, ma ọgawere oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ime ka abụba zuru oke ma kwalite ịdị arọ dị mma. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-eme aerobic omume, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọabụba.02.02.2021
Ogologo oge ole ka ịgba ịnyịnya ígwè otu ụbọchị?
Otutu ubochi, otu uzo gbara ọsọ 1 Agbụrụ Gburugburu America, United States 9 ụbọchị otu ogbo 4,800 km (3,000 mi) 2 TransAm Bicycle Race, United States ụbọchị 17 otu ogbo, akwadoghị 7,100 km (4,400 mi) 3 Transcontinental Race, European Union 7 -10 ụbọchị otu ogbo, akwadoghi 3,200 ruo 4,200 km (2,000 ruo 2,600 mi)
Enwere agbụrụ ụmụ nwoke na-agba n'okporo ụzọ n'ụwa?
Nke a bụ ndepụta nke ihe dị mkpa ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè ndị nwoke na-eme. Ndepụta ahụ na-agụnye agbụrụ ndị dị n'okporo ụzọ, ọ nweghịkwa egwu, ugwu ma ọ bụ agbụrụ cyclo-cross. Ihe ncheta, Elite na 1.HC Otu ụbọchị agbụrụ gụnyere agbụrụ ndị bụ akụkụ nke UCI World Tour, yana agbụrụ ndị ASO, RCS na Unipublic na-ahazi. GP de Quebec.
Kedu agbụrụ agbụrụ kachasị ewu ewu n'afọ?
'$ isi isiokwu.' Cyclingstage.com na afọ niile na-ekpuchi agbụrụ ndị anyị nwere mmetụta miri emi. N'ezie na Giro d'Italia, Tour de France na Vuelta a España, mana enwere ọtụtụ karịa…